Uma enkonzweni nail kwaqhamuka impahla ezifana Shellac, imfashini yezipikili zemvelo emuva futhi. Futhi akumangalisi! Kungani ukugqoka yokufakelwa, uma kungenzeka kukhule bebodwa, ukwenza manicure enhle, abese ekhohlwa amafayela nail sikelo amasonto ambalwa? Ngeshwa, Shellac kusukela CND kuwufanele eqolo. Gel PNB sula baba indlela yokuphuma!
Asinakusho ukuthi le mikhiqizo kakhulu ezishibhile kakhulu. Nokho, inani ku ijeli nail PNB lingaphansi kakhulu kunezinye analogue uphawu. Kuyaphawuleka ukuthi abaningi nokucwala yangasese futhi inkosi yaqala ukulihambisa le nkampani, njengoba kungenzeka ukusindisa on izimpahla. Izindleko elilodwa ibhodlela ezinemibala gel ukuvenisha amabanga ruble 450-600.
Umenzi uthi hold okwalotshwa izinzipho kakhulu ngendlela amasonto amane. Ngokusho imiphumela amakhosi isheke wembula ukuthi ijeli nail PNB muhle ngempela. Lapho zisetshenziswa kahle kucatshangwa ncamashi ezingu-28. Ukuvumelana we impahla ngokwanele aminyene, gel nail akusho zisakazwa izinzipho, ngokushesha polymerize e isibani UV akusho ninamathele.
Naphezu kweqiniso lokuthi inkampani eRussia akukakabi kakhulu eyaziwayo, labo kakade balinganisela entsha kusho isithunzi ngoba manicure ngokwanele. Gel sula PNB, ukubuyekezwa zazo ikakhulukazi okuhle, intandokazi kwabaningi. Iseluleki inothi ikakhulukazi kalula kakhulu sokusebenza naye. Okokuqala, izinto ezinhle, futhi ncamashi udela. Akazange "strip", njengoba ongakhetha eziningi eziphansi. Okwesibili, awusebenzi crumple ngesikhatsi isitoreji isikhathi eside. Ngokwesibonelo, abanye gel ukuvenisha nezinye izinkampani bathambekele delaminate ngesikhathi Ukuphumula. Futhi ngokuvamile akha Clumps e ukungaguquguquki. Gel PNB sula lokhu akuzange kubonwe. Ngisho noma ayisetshenziswa izinyanga ezimbalwa, ke igcina ukungaguquguquki yayo zinjalo. Okwesithathu, gel nail PNB, ukubuyekezwa zazo kakhulu yokudumisa, has a Iphalethi ubanzi kakhulu. Khetha umbala kwesokudla akunzima kakhulu. Ukuthenga eziningi ngesikhathi esisodwa futhi akudingeki.
Ngokwemvelo, zikhona shades eziningi kusuka Ukusabalala eside. Iyathinteka futhi inkampani PNB (gel sula). Palette kakhulu, sihlanganise indawo ebanzi kakhulu. Sekukonke kunezinhlobo ezingaphezu kuka amakhulu ezihlukile. Nokho, ukuthenga eziningi ngesikhathi esisodwa akudingekile. Izingcweti eziningi zisebenzisa iqhinga kancane. Njengoba wathenga uveza nemithetho eyisisekelo imibala eyisisekelo, bona uhlanganise ndawonye ku-Iphalethi yobuciko shades entsha. Ngenxa ukuvumelana ijeli iyunifomu sula, enze lokhu inqubo kahle elula. Lwanele uhlanganise ethile impahla, bese ukuhlola umphumela, ukulawula saturation umbala. Njengoba indlela ulondoloze imali esigabeni sokuqala le nguqulo kuba impela.
Ngokuvamile balukhulume zifiki ukuthola amasethi ephelele "zonke-in-one" hhayi ukuba ahlukumeze ngokwakho ngokukhetha izinto ezifanele namathuluzi. Qala-setha gel ukuvenisha PNB ibizwa ngokuthi i-Complete PNB Gel Polish Starter Kit. Kuhlanganisa ezifana zakhi zegazi eziyinhloko njengoba isibani UV (9 Watt compact, isayizi esincane), izinti orange, isizinda kanye ophezulu we-nail eside, umbala ibhodlela (obomvu). Ngaphezu kwalokho, kwakungeyona into ngaphandle isikhonzi uketshezi. Okungukuthi dehydrator nail (kususa akhanye, bome plate nail), kusho i-kokukhipha remuvera ukuhlakazwa ungqimba. Lesi sakamuva kuyadingeka ukususa ukumelana nail sula ngaphandle umonakalo. Yiqiniso, ngaphezu une ukuthenga ifayela nail, ezinemibala ngisho gel ukuvenisha, buff. Okokuqala-ke kuyoba okwanele.
Gel sula ekusetshenzisweni PNB akuhlukile nabanye kulesi sigaba. Kuyadingeka ukuba zibulale izandla, ukunikeza izinzipho zakho ifomu ifayela nail, ukubuyela emuva cuticles, susa bukhanye. Ngemva kwalokho, base sisetshenziswa ngendlela ungqimba elincanyana womile. Isendlalelo ukuhlakazwa is akakhishwanga ke ukwakha ngezinto ezinamandla adhesion. Coloured gel ukuvenisha sisetshenziswa izingqimba mncane eside ngakho kuze kube oyifunayo ithoni iLuminance. Njalo kudingeka kahle ezomile wena. Isinyathelo sokugcina ukuze uvikele phezulu nokususa manicure ungqimba dispersive ukuze marigold zagcwala. On the cuticle kungabangela uwoyela okunomsoco. Beautiful manicure yakho!
Uchungechunge lwezihloko ezithi "Iphunga zasendle rose". Abalingisi kanye izindima
RedeX phrojekthi: Izibuyekezo